မယ့်ကိုး: မကျွမ်းဝင်တဲ့ဝေါဟာရက သူငယ်ချင်း
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 6/19/2013 06:45:00 PM
သူငယ်ချင်းကောင်း မိတ်ဆွေ ကောင်းဆိုတာ
လောကမှာ အရှားပါးဆုံးနဲ့ အဖိုးထိုက်ဆုံးသော သူတွေပါ မျှဝေ ခံစားချင်း ဆိုတဲ့ အမြင်မှာပေါ့ ။
19/6/13 10:05 PM
19/6/13 10:14 PM
သူငယ်ချင်း ငိုဖို့ အတွက် ကြက်သွန် နီလေး ဖြစ် ပေးချင်တယ်.....။
20/6/13 3:44 AM
အဲလိုသူငယ်ချင်းမျိုးအဖြစ် အနော်ဖြစ်ချင်ပါရဲ့။ မယ့် သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်ရမလား။ ဘာပြောပြော နားထောင်ပေးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးလဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ချောကလက်ဝယ်ကျွေးဖို့လဲ မပျက်ကွက်မယ့် သူငယ်ချင်းမျိုးအဖြစ်၊ ရေခဲမုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့လဲ သတိတရရှိတဲ့သူငယ်ချင်းမျိုးအဖြစ်။ ပြီးတော့ စိတ်ညစ်လာရင် အနော်က နည်းနည်းရစ်တတ်တဲ့ ဂျစ်တိုက်တတ်တာတော့ သတိထားရမယ် မယ့်။ သေချာတာကတော့ မယ့်က အနော့်ရဲ့ ရင်ဖွင့်ဖော်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။
We need lovely friends..
20/6/13 4:11 PM
ဟုတ်ပါရဲ့ မယ့် ...
မယ့်သူငယ်ချင်း ဖြစ်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်ရမယ်ဆိုလဲ
ပြောဗျာ...တင်မယ် အဲဒါ အပန်းမကြီးဘူးးးးးးးးးး
တကယ် အပင်ပန်းကြီး ပင်ပန်းလာတဲ့အခါကျရင်
သူငယ်ချင်းရင်ခွင်က နံပါတ်နှစ် အကောင်းဆုံးရင်ခွင်ပဲ..
သိတယ်မလား ချစ်သူရင်ခွင်ဆိုတာ အမြဲအစိုးရတာ
20/6/13 10:24 PM
မချစ်တတ်တာကောင်းတယ်...မုန်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့...ဘ၀မှ တစ်ခါတစ်ခါ မချစ် မမုန်း နေကြည့်ချင်သပါ့...စကားမစပ် အရေးအသားပုံစံကို သဘောကျတယ်...စိတ်ကစဉ်းကလျား ဖြစ်တာကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ အရေးအသားမျုိုး...
22/6/13 7:43 PM
ဘာမှမဆိုင်ပဲ ငါးပုံပြင်လေးကို သတိရမိသေး။
နည်းနည်း အလုပ်ရှူနေတဲ့အခါ လာမနှုတ်ဆက်ဖြစ်ပေမယ့် သတိရနေတာပါ။
လိုတဲ့အခါတိုင်း ဖုန်းဆက်လိုက်၊ မက်ဆေ့ပို့လိုက်..
အမြဲ မယ့်ရဲ့ အစ်မလည်း ဟုတ်၊ သယ်ရင်းလည်း လုပ်မယ့်သူပါ။
23/6/13 10:42 PM
Call me anytime nyi ma lay. I understand your feeling.
17/12/13 10:31 AM
ဆွေလေးကတော့ ကံကောင်းတယ် ပြောရမယ်
မယ့်မှာလဲ ရှိမှပါ.. မယ့်ကမမြင်လို့နေပါလိမ့်မယ်..
19/12/13 12:38 PM